Faallooyinka qasabadda Delta jikada, Hagaha wax iibsashada ee qasabadaha Delta jikada, qasabadaha jikada
Bogga ugu weyn / blog / Faallooyinka qasabadda Delta jikada: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee qasabadaha Delta jikada
2021 / 02 / 03 Qoondayntablog Tilmaamaha qasabada 781 0
Jikadaada ayaa ka badan meel lagu wada tuuro casho. Waa meel isugu imaata gurigaaga, iyo qoysas badan, waxay u tahay il diirimaad iyo farxad. Tuubada saxda ah ee jikada ayaa dhameystiri doonta muuqaalka aad rabto iyadoo shaqadaada karinta iyo nadiifinta u sahleysa.
Si aad uhesho midka ugufiican jikadaada, kafiiri dib u eegista Delta Faucet qasabadaha jikadayada Delta.
1. Essa Soo jiid Qasabada Jikada
Tuubada jikada saxda ah waxay ubaahantahay dhamaan astaamaha aad rabto adigoon qarash gareeyn miisaaniyadaada. Dheelitirka u dhexeeya qiimaha iyo muuqaalada anfacaya, ka Essa Soo Jiid Qasabada Jikada 9113-AR-DST wuxuu kahelaa meesha ugu sareysa liiska qasabadaha jikada.
Waalka dheemman ee lahaanshaha
MagnaTite Mecking ee tuubada soo jiidanaysa
Afar xulasho dhammayn
Buufiyo iyo qulquli hawlaha
Khadadka isku dhafan ee InnoFlex PEX ayaa lagu daray
Delta Essa Pull Down Kitchen Faucet wuxuu leeyahay naqshad fudud oo leh astaamo toosan, laakiin waa nooc sifiican ugu habboon jikada kasta. Tuubbada ugu yar waxay leedahay marin jilicsan oo jilicsan oo leh hal gacan oo hawlgal ah, halka tuubbada soo jiidanaysa ay ku siinayso dhammaan dabacsanaanta aad u baahan tahay.
Mid ka mid ah kuwa guryaha jecel ayaa jecel godadka lagu buufiyo taabashada-Nadiifka. Mar dambe looma isticmaali doono burushka cadayga ama burushka cadayga si aad isugu daydo inaad nadiifiso godadka tubbadaada, gaar ahaan haddii biyahaagu ka baxaan kaydadka macdanta.
2. Leland jiida tuubada
Kawaran hadaad jeceshahay howlaha qasabada Essa laakiin aad dooneysid in tubadaada ay ahaato muuqaal casri ah, muuqaal dhaqameed ah? The Leland jiida Down tuubada 9178-AR-DST waa doorashada ugu fiican.
Buufiyo, qulquli, iyo ShieldSpray hawlaha
Leland waxay bixisaa astaamo isku mid ah sida Essa laakiin marka lagu daro ShieldSpray Technology. Abuuritaanka Delta ee hal-abuurnimada ah wuxuu ku siinayaa durdur awood leh adoo yareynaya faafitaanka. Qiyaas inaad maydho suxuunta adigoon sidoo kale nadiifinin qashinka ka dib.
In kasta oo heerka Leland uu la yimaado dhammaan astaamahan sare, haddana waxaad sidoo kale haysataa ikhtiyaarka Leland qasabad leh xulashooyin kale oo horumarsan. Isku day tusaalaha taabashada2O xakamaynta taabashada ama maalgashiga qaabka ugu horumarsan ee leh VoiceIQ, taas oo kuu oggolaanaysa inaad ku xakameyso qasabadda weheliyaha kaaliyahaaga codka sida Alexa ama Google.
3. Qasabadaha Hal-Gacan ee Trinsic
Kuwa iyagu doorbidaya muuqaal ka casriyeysan qasabadooda, Trinsic Tuubbada Keli-Gacanta 9159-AR-DST waa doorasho weyn. Waxay leedahay dhammaan astaamaha iyo kalsoonida Delta Faucet kasta oo leh qaab jilicsan.
Shan xulasho dhammayn
Tilmaamaha iyo qaabku waxay u egyihiin inta udhaxeysa Trinsic iyo Essa. Si kastaba ha noqotee, Trinsic wuxuu leeyahay qiimo sare. Dhammaadka qaar ayaa ka qiimo badan kuwa kale, in kasta oo xulashada saxda ahi ay ku dejin karto muddo tobanaan sano ah.
Sida moodooyinka kale ee kujira liiskan, Trinsic wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyadda casriga ah ee 'Innoflex PEX' ee Delta si loo yareeyo halista daadinta tuubadaada. Ku lamaan Delta Delta Seal waalka, wuxuu sameeyaa qasabad muddo dheer soconaya oo jikadaada ka ilaalinaysa daadashada iyo dhaawaca biyaha.
4. Lenta Qasabadaha Gacanta Kaliya
Markaad wax u iibsanayso qasabadaha, qaabku wuxuu noqon doonaa waxa ugu horreeya ee ishaadu qabato. The Lenta Tuubbada Gacanta Keli ah 19802Z-CZ-DST waxaa hubaal ah in ay dareenkaaga ku soo jiidanayso saldhiggeeda gaarka ah ee laba jibbaaran, laakiin kama dhigeyso tayada nidaamka.
Lenta waxay leedahay dhammaan astaamaha caadiga ah ee aad ka fileyso Delta Faucet: waalka tayada-sare leh, InnoFlex PEX khadadka saadka, iyo MagnaTite Docking. Tiknoolajiyada caanka ah ee ShieldSpray iyo tuubada jilicsan ayaa ka dhigaysa mid iskufilan oo ku filan oo lagu maareeyo shaqo kasta.
Hal farqi oo u baahan in la tixgeliyo ayaa ah in si ka duwan qaar badan oo ka mid ah qasabadaha kale ee liiskan ku yaal, Lenta aysan bixinayn ikhtiyaar ay ku jirto VoiceIQ
5. Essa Tuubbada Hal-Gacan-Bar-Diyaarinta
Essa-ka: qasabada Delta aad ayey u fiicnaayeen laba jeer ayey ka dhigeen. Tani Essa Hal-Gacan-Bar-Diyaarinta Faucet 9913-AR-DST wuxuu la mid yahay qaabka Essa ee aan ku dhiganay lambarka koowaad liiskayaga, laakiin leh qiime yar oo ka hooseeya.
Labada nooc ee Essa waa isku mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin fure: kani wuu yaryahay. Burburka Essa Pull-Down Faucet wuxuu gaarayaa in ka badan sagaal inji saldhigga, halka gaadhista qaabkani ka yar yahay toddobo inji. Moodelkan yar ayaa sidoo kale dhererkiisu yahay 14.5 inji marka loo eego 15.75-inji Essa Pull-Down Faucet.
Labada cabirba waxay leeyihiin waxtarkooda iyo khasaarahooda. Qasabad weyn ayaa ku siin doonta booska saxanka oo badan oo aad ku nadiifiso waxyaabaha waaweyn. Isla mar ahaantaana, dhammaan madbakhyadu ma haystaan ​​meel loogu talagalay qasabadda weyn sababta oo ah waxaa jira kabadho, armaajo, ama waxyaabo kale oo lagu rakibay dusha saxanka. Waxay ku saabsan tahay cabirida booskaaga iyo ogaanshaha waxa aad la qabsan karto.
6. Addison Hal-Gacan-qabsi Jikada Tuubbo Siibiil
Haddii aad rabto muuqaal gaar ah oo curvaceous ah qasabadda jikadaada, waxaad jeclaan doontaa naqshadeynta Addison Hal-Gacan-ku-qaadka Jikada Dhalo Wabiga 9192-AR-DST. Dabcan, waxaa jira waxyaabo badan oo sifooyin hawlgal ah oo aad u jecel.
Qofna kuma eedeyn karo Addison inuu yahay mid khiyaano badan. Ka feker qasabadani inay tahay lahjad qurxinta guryaha lagu qurxiyo oo waliba ku dhacda inay bixiso astaamo qasabadeed weyn. Ma aha oo kaliya Addison waxay leedahay naqshad casri ah laakiin waa qasabad gaar ahaan dheer.
Dusha sare ee kalsoonida Delta Faucet, Addison waxaa ka mid ah ShieldSpray Technology si ay kuu siiso awood aad ku buufiso xoog leh buufin yar. Xajmiga caanka ah ee 10.34-inji wuxuu gaarayaa dhererkiisuna wuxuu ku siinayaa awood aad ku dhex mari karto dheriyo waaweyn iyo waxyaabo kale oo dhib badan saxanka dhexdiisa.
Xulashada Delta Delta Jikada Qashin-qubka
Dhammaan qasabadaha jikada ee kor ku xusan waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda iyo khasaarahooda. Markay u soo degto, in kastoo, midkoodna wax weyn ku kordhin doono jikadaada qaab iyo shaqo labadaba.
TagQubeyska jikada	Hore:: Faallooyinka tubada Musqusha Delta: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee qasabadaha Delta Musqusha Next: Faallooyinka tubbada Delta Shower: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee Delta Delta Bulukeetooyinka
Caqabad, Naqshadayaashu waxay gacan ka geysteen Naqshadaha Albaabka Albaabka Weyn ee yaabka leh
2021 / 06 / 08 431
220㎡ Jaranjarada Shanta Qol ee Hoose, Qaabka Casriga ah | Naqshadeynta Shirkadda Hongfu
2021 / 05 / 28 540
2021 / 05 / 13 1069
2021 / 05 / 09 784
2021 / 05 / 08 672
2021 / 04 / 22 888